युवतीहरु किन मन पराउँँछन् भान्टा ? यस्तो रहेछ कारण ! – onlinedarpan:
Posted on December 9, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 274 Views
काठमाडौँ – स्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्ने हो भने भान्टा निकै फाइदाजनक हुन्छ । आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहने हुँदा युवतीहरुले भण्टालाई मन पराउने गर्छन् । उनीहरु स्वादिलो तरकारी तथा विभिन्न प्रकारका फलफुलहरुको सौखिन हुन्छन् । हाम्रो गाउँघर तिर पाइने भाण्टामा निकै पौष्टिक तत्व पाइन्छ । भान्टामा भिटामिन सि पनि पाइन्छ ।
भान्टामा पाइने पौष्टिक तत्वले विभिन्न रोगहरुसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गराउननुको साथै शरिरमा हुने संक्रमणहरुबाट पनि बचाउने गर्छ ।
स्वास्थ्यको मामिलामा भान्टालाई अन्य तरकारी भन्द कयौँ गुण लाभदायीक मानिन्छ । भाण्टाले हाम्रो शरीरलाई स्वास्थ्य राख्ने गर्छ ।